07-07-2012 08:07 AM #991
waeYu q&mausmf0if;wdkY udkZm*emwdkY OD;aqmifwJY a[maNymyGJwpfcktaBumif; onfAGdKifY&JY azYbkwfay:rSmvm;rodbl; awGYvdkuf&w,f/
'Da[maNymyGJtao;pdwfudk onfAGdKifYxJrSm ygavmufw,f? 'gayrJY usaemfawmYrzwf&ao;awmY aoaocsmcsmawmY rodygbl;? tBurf;zsif; od&oavmufawmY statesman aumif;awG tem*gwfNrefrmNynfrSm rsm;rsm;ay Gef;a&; a[maNymBuwmvdkY od&ygw,f/
ဒီနေ့ထွက်တဲ့ဂျာနယ်မှာ သတင်းအဖြစ်တော့ ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲက ဦးသူရ (ဇာဂနာ) ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ထဲက အတိုလေးဖော်ပြထားတယ် ။
" မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်မလုပ်ရပဲ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြစ်တင်မှုများနေကြပြီး အပြစ်တင်မှုများကို လျှော့ချသင့်ကြောင်း " ပြောသွားတာပါ။
adaptor, badinf, barronbala, Chit.tat.lun.tu, Dreamy, fergusan, GuruAM, Hollinaz, honelay86, htinlinn, Jim, k-pooh, KaungKinPyar, khit, ko too, ktg, LU SHAY, mahawgani, mgknow, MNO.BN, mokenlay, myanmargunner, NEO, petit, shadow69, thuthuaung, yokesoe, zepeian
07-07-2012 03:37 PM #992
Thanked 216 Times in 18 Posts
လက်ရှိအစိုးရ (သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်) ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးအဓိကဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီး သွားပြီလို့များ မထင်လိုက်လေနဲ့ခင်ဗျာ။ မျက်နှာဖုံးတွေကို လှအောင် ဆေးခြယ်နေကြတာ။ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ သူတို့လိုချင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက် ဟန်ပြအနေနဲ့ တချို့တလေ လိုက်လျောခဲ့တာလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကို မထိခိုက်နိုင်တာလေးတွေ လောက်ပဲ လိုက်လျောတာပါ။ သူတို့ကို ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု လိုဟာမျိုးကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ အာဏာရှင်စိတ်ဟာ အမြစ်တွယ်နေပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌတို့၊ တိုင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ အကုန်လုံး သူတို့ဟာ အာဏာရှင်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတယ်ဆိုတာ သူတို့လုပ်ရပ်တွေ ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဦးရွှေမန်း အပြောတွေကောင်းပြနေလိုက်တာ အောက်ခြေက အလုပ်သမားတွေ၊ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုထိခိုက်ပါတယ်၊ ပြည်သူဘဝတွေ မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်တွေ ပြောနေလိုက်တာ တကယ်စိတ်ရင်းမှန်ရင်၊ စေတနာရှိရင် သူနဲ့ သူ့သားတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဦး။ သူများတွေကိုသာ ဘာဖြစ်သင့်တယ်၊ ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘာလုပ်သင့်တယ်နဲ့။ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုပဲ အရင်ပြုပြင်ပါဦးလား။
ပြောလိုက်တာ မတူတာတွေခဏဘေးဖယ်။ တူတာတွေအရင်တွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဗမာ/မြန်မာ စကားလုံးကိုပဲ လိုက်ငြိနေကြတယ်။ စကားတွေ ရိသဲ့သဲ့ပြောလိုပြောနဲ့။ အကြံပေးဆိုပြီး ခန့်တယ်။ သူတို့မကြိုက်တဲ့ အကြံပေးတော့ ခုဆို ဦးမြင့်တောင် ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ မသိဘူး။ ဒီလို ကိုယ့်စိတ်ကိုတောင် မပြင်နိုင်ပဲနဲ့ သူများတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပဲ ပြင်မယ်ပြောနေတာ ယုံချင်စရာပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို ဘာမဟုတ်တဲ့ သာမန်လူတွေတောင် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့နည်းလမ်းတွေ ဆွေးနွေးနိုင်သေးတာ သူတို့လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက ကစိတ်ရှိဖို့၊ ဆန္ဒရှိဖို့ပဲ။
၈၈ မျိုးဆက်တွေ ဘာလုပ်နိုင်ပြီလဲ။ ဘာတွေလုပ်ပြနေလဲ။ ဝေဖန်သူတွေအများကြီးပဲ။ ခုချိန်မှာ အရေးကြီးတာတွေ လုပ်ပြပါတို့။ ပြည်သူတွေ ထမင်းနပ်မှန်အောင် လုပ်ပေးပါတို့ ဆူညံနေတာပဲ။ ကျွန်တော် ၈၈ မျိုးဆက်ကိုလည်း မကိုးကွယ်ပါဘူး၊ အရမ်းကြီးလည်း အထင်မကြီးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ထက်တော့ သာတာအမှန်ပဲ။ သူတို့လို ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ သူတို့ဘဝကို ရင်းပြီး လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်နေကြတာပဲ။ သူတို့ဒီထက် ဘာပိုလုပ်နိုင်မှာလဲ။ သူတို့မှာ အာဏာလည်းမရှိဘူး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး၊ ငွေကြေးအင်အားလည်းမရှိဘူး။ ဒါကိုဘာလုပ်ပါ ညာလုပ်ပါနဲ့ ဘာတွေတောင်းဆိုနေကြတာလဲ။ ကိုယ်ကော သူတို့ကို တစ်ပြားတစ်ချပ် သွားလှူဒါန်းထားလို့လား။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တစ်ယောက်က ဗကသကို ပြည်သူတွေက ဘယ်လောက်ထောက်ခံလို့ ဖွဲ့ထားတာတုန်းတို့၊ ကျောင်းစာစိတ်မဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသားကြီးတွေတို့ နဲ့ သမဂ္ဂဆိုရင် ဆူပူဆန္ဒပြတဲ့ အဖွဲ့လို့ပဲ ထင်မြင်နေကြတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအသိ၊ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝမှု ကတော့ အခြေအနေတော်တော်ဆိုးလာပြီ။ ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် မျက်စိပိတ်၊နားပိတ်ပြီးအမှောင်သွင်းထားခဲ့တာကိုး။ ကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရှေ့လောက်ထိက တော်တော်မျက်စိ၊နားပိတ်ခံခဲ့ရတာ။ ၈၈ မတိုင်ခင်ကဆို ဒီအကြောင်းတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ လမ်းစဉ်လူငယ်တို့၊ ရှေ့ဆောင်လူငယ်တို့၊ တေဇလူငယ်တို့နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာ။ ခုခောတ်လူငယ်တွေကတော့ လေ့လာမယ်ဆို တော်တော်အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အချိန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုခေါတ် လူငယ်တွေကတော့ Chatting နဲ့ AOE လောက်တောင် စိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူး။ ဒီလူတွေက အေးအေးဆေးဆေး မနေကြဘူး။ လမ်းပေါ်တက်ဆူအောင် လုပ်နေတယ်။ အစိုးရက သနားလို့ မဖမ်းသေးတာဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ သူတို့အတွက်က တိုင်းပြည်တိုးတက်တာတွေ၊ ဒီမိုကရေစီတွေမသိဘူး။ ခွင်ရိုက်တတ်ဖို့နဲ့ နိုက်ကလပ်တက်နိုင်ဖို့ကပိုအရေးပါနေကြပြီ။
အစိုးရကလည်း တစ်ထစ်ရှိ ဖမ်းမယ်၊ဆီးမယ်။ အကြောက်တရားနဲ့နှိပ်ကွပ်မယ်ပဲ ကြံစည်နေတာ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတဲ့။ သောက်ရှက်မရှိတဲ့ မျက်ခွက်တွေနဲ့။ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့လုပ်လို့ပိုဆိုးကုန်တာ။ တချို့တွေဆို အစကအဲဒီလောက်ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တာမဟုတ်ဘူး။ ထစ်ခနဲရှိဖမ်းပြီးထောင်ချ၊အဖမ်းခံပြီး ပြန်လွတ်တော့လည်း ပုံမှန်နေလို့မရတော့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပိုပြင်းထန်ကုန်ကြရော။ ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုပဲဆက်လုပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့။ လွှတ်ပေးလိုက်ပါ ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၈၈၈၈ နှစ်ပါတ်လည်ဖြစ်ဖြစ်။ အဆိုးအဝါးကြီးမဖြစ်ရင် မသိသလိုနေလိုက်၊ ပြီးသွားမှာပဲပေါ့။ သူတို့ကပြောတယ် ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်မရှိလို့တဲ့။ ခင်ဗျားတို့အစိုးရ၊လွှတ်တော်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေပဲ ဒီမိုကရေစီအလေ့အကျင့်ရအောင် အရင်လုပ်ပါဦးလို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်။
good post bro, appreciate it. Hi Ko Zarni and moefyi, please read carefully and it will reflect on your valued ideas. They(U Thein Sein Group) are just pretending at all. Take care their stupid steps.
Last edited by byn; 07-07-2012 at 03:48 PM.
azaw, DD85, fergusan, fridayborn, honelay86, Jim, KaungKinPyar, khit, ko too, ktg, mahawgani, mgknow, myanmargunner, robin76, shadow69, yokesoe, zani
07-07-2012 05:29 PM #993
Wannabe Cupid .
Thanked 1,236 Times in 44 Posts
ဒီဇယ်ဆီအဟောင်း၊ အင်ဂျင်ဝိုင်အဟောင်းတွေကို ပြန်ဝယ်တာက ဒီဇယ်ဆီပြန်ချက်ဖို ၀ယ်တာပါ။ ကျွန်တော်သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးတာပါ။
fergusan, honelay86, k-pooh, ko too, mahawgani, mgknow, mgmgthan, myanmargunner, robin76, shadow69, yankanar, yokesoe
07-07-2012 11:14 PM #994
tpdk;&taeeJY 'Dudpörvkyfoifhbl;vdkY xifw,f/ 7th July qdkwm bmvJqdkwmudk odwJhol awmfawmfenf;aewJh tcsdefrSm vkyfwJholawG vkyfawmha&m bmjzpfrSm rdkYvdkYvJ/
bmbJaNymaNymor*¾taqmufttkHudkb,fawmhrSarhrSmr[kwfbl;? tJ'DrSm vqef;&if&Skr0 aoG;aomuf bwfcJh&w,f? aumfzDwcgwavaomufw,f? usm;xdk;w,f/ ppfwk&ifupm;w,f/ ausmif;om;acgif;aqmif udkouf (tckawmh OD;oufNzpfrSmaygh) eJY 2-3 yJGupm;bl;w,f/ udkoufawiftckb,frSmvJrod? uRefawmfwdkYq&m a'gufwmatmifMuD; qdkydkowd&tkH;r,f? 7-7-62 rSmNzdKvdkufNyDMum;&awmh yxrr,HkEdkifbl; aemufawmh vkyf&ufavNcif;qdkNyD; 0rf;enf;&Nyefw,f/
academy, adaptor, akm, AUNGTHUYA, badinf, barronbala, fergusan, Grace, honelay86, Jim, Jin_kaleat, k-pooh, khit, ko too, koluchaw, mahawgani, mgknow, mokenlay, myanmargunner, nnnaing, nyohtetnyo, painpainlay, robin76, shadow69, skybluecolor, sumoenaing19, thuthuaung, WinPP, yankanar, yokesoe, ZAM
07-07-2012 11:17 PM #995
Last edited by sumoenaing19; 07-07-2012 at 11:19 PM.
Lights will guide you home And ignite your bones (Coldplay)
akm, AungNN, barronbala, botherband, fergusan, Grace, honelay86, k-pooh, khit, ko too, mahawgani, mgknow, myanmargunner, nyohtetnyo, painpainlay, robin76, shadow69, thuthuaung, yankanar, yelynn80
07-07-2012 11:24 PM #996
udkoufaumif;&mok*wda&mufygap/ uH uH&JhtMudK;bJaygh/
akm, barronbala, chitpa, honelay86, Jin_kaleat, khit, ko too, ktg, mahawgani, myanmargunner, shadow69, sumoenaing19, thuthuaung, yankanar
07-08-2012 09:57 AM #997
vmbfay;vmbf,lrIyaysmufa&;Oya'Murf;udk 'DuaeY zwf&I&ygw,f/
Oya'Murf;yg tcsufrsm;udkjzifh uGefeuf&Sif tcuftcJaMumifh razmfjyvdkawmhyg/
rygwJh tcsuftcsdKUudkom aqG;aEG;vdkygw,f/
1/ Oay'Murf;&JU toGm;tvmoabmt& wkdifMum;rI&SdrS ppfaq;r,fhoabmawGU&ygw,f/ rwdkif&if rppfr,fh oabmjrifrdw,f/
NyD; ppfaq;r,f? w&m;pGJr,f? ydkifqkdifrIodrf;r,f? ponfjzifh jyXmef;rIawG[m a,bk,stm;jzifh aumif;ygw,f/
vlwpfOD;csif; yk*f*voabm &nfnTef;vdkjcif; jrifrdw,f/
wkdifwJhol r&Sdbl;/ b,fvdk ppfrvJ/
wpfa,mufcsif; vmbf,lwmr[kwfbl;/ tzGJUvdkuf/
vkyf&dk;vkyfpOf tpOftvmwpf&yfvdk jzpfaewJh udpfprsdK;/
epfemolqdkwJh toHk;tEIef;vnf; owdjyKrd&JU/
tcsdKUtrIawGu epfemol[m trsm;jynfol odkYr[kwf tpdk;&aiGaMu;/
atmufuaecdk;? NyD; tpOftvmt& txufudk a0pkawG ay;aewmrsdK;aum 'DOya'u b,fvdkvkyfrvJ/
uRefawmf zwfMunfhorQawmh azmfjyxm;jcif; r&Sdyg/
'gaMumifhrdkY wkdifMum;ol? odomjrifomwJh epfemol r&Sdapumrl? Xmeqdkif&mawGrSm t&dk;pGJaewJh
vufaqmify@may;wm? a0pkcGJwm? pwJh vmbfay;vmbf,lrIawGtwGufvnf; xnfhoGif;pOf;pm;NyD;
rwdkifayr,fh rouFm&if ppfaq;EkdifwJh vkyfydkifcGifh ay;xm;oifhw,fvdkY qdkvdk&if;yg/
2/ jypf'Pftydkif;rSm axmif'Pf 15 ESpf? 10ESpfuae atmufqHk;tqifhrSm5ESpf trsm;qHk;? 'Dtjyif aiG'Pfvnf; csrSwf&r,fvdkY yg0ifw,f/
wdkifwJholu rrSefruef wdkifw,fqdk&if axmif'Pf5ESpf? trsm;qHk;? 'Dtjyif aiG'Pfvnf; csrSwfygowJh/
jypfrIusL;vGefoleJY rSm;,Gif;(wrifvnf;jzpfcsifjzpfr,f) wkdifMum;olwdkY&JU jypf'Pf[m rwdrf;r,drf;jzpfaeygw,f/
Oya'&JU trnfudku ]]vmbfay;vmbf,lrIyaysmufa&;}} vdkY qdkxm;wm owdcsyfoifh&JU/
]]vmbfay;vmbf,lrI wkdifMum;ol yaysmufa&;}} r[kwfygbl;/
'DOya'[m wkdifMum;rIawGudk ,ckxufydkrdkNyD; vdkvdkvm;vm; zdwfac:zdkY vdkygr,f/
b,folrS rwdkif&J&ifvnf; 'DOya'[m tvum;ygyJ/
rSm;,Gif;wdkifMum;rIjzpfw,fqdk&if bmtjypf'PfrS ray;oifhbl;/ r[kwfbl;qdkwm olUudk em;vnfatmif&Sif;jy? rSm;,Gif;aMumif; 0efcHcdkif;vdkuf&if NyD;wmygyJ/
tJ wu,fvdkY wrifwumtuGufqifwkdifMum;aMumif; pdppfawGU&Sd&&ifvnf; jypf'Pfudk5ESpfavmufMuD; ray;oifhbl;/ 1 ESpfavmufqdk vHkavmufNyD xifrdygw,f/
MudrfvHk;u enf;enf;MuD;awmh wkdif&JMur,fr[kwf? tJhvdk rwkdif&J&if vmbfay;rSkawG yaysmufzdkY w,fNyD; rvG,fvSbl;vdkY ,lqaMumif;yg/
academy, badinf, Bae Lu Wa, Black Xenon, chitpa, fergusan, filffy143, gigabyte, GuruAM, Hollinaz, honelay86, Htun Zaw, jim beam, Jin_kaleat, k-pooh, ko too, kowailin, koze, ktg, LU SHAY, mahawgani, mdychat, mokenlay, nnnaing, NyoMar, painpainlay, patriot, pieces, Ravan, robin76, san19682000, shadow69, springnet1997, sumoenaing19, unicorn7, Warez, yankanar, yarthiudu, yelynn80, yokesoe, zani
07-08-2012 10:22 AM #998
t&ifuawmh tpdk;&udk txifawGMuD;w,f/ tdrfeJY ajym&if uRefawmfwdkYu acgif;wpfvHk;wnf; pOf;pm;wm/ uRefawmfwdkYu bmAsL[modvkdYvJ/ bmvkyfwwfvdkYvJ/ bmem;vnfvdkYvJaygh/
'gayr,fh/ tckawmhAsm/ olwdkYu acgif;trsm;MuD;eJY pOf;pm;wm/ acgiff;uawmh jason voorhees OD;aESmufeJY vm;rodbl;/
t&ifuajymw,f plan aumif;w,f/ implementation nHhw,faygh/ tcka&m ............
august, aungzaya, fergusan, honelay86, k-pooh, ko too, ktg, mahawgani, mdychat, painpainlay, robin76, shadow69, yankanar, yelynn80, yokesoe
07-08-2012 11:31 AM #999
roefhwJhqDawGudkjyefcsufwmuawmh 7efukefrSmvnf;&Sdygw,f...pufrSkhZkefjuD;awG&Jhvrf; awGxJrSm pufbDwpfpD;ESifhaemufrSmyHk;ESpfvHk;ESifhcawmhwpfc k/ydwfpdrf;yg;vdkydwfpav;awGwifjyF wpfvrf;0ifwpfvrf;xGufa&ajrmif;xJu tcsdKhpuf&HkawGupGefhypfwJh 'DZ,fqDysuf?t*sFif0dkifysufESifhpm;aomufukefvkyfie f;rsm;rSpGefhypfaq;ausmwJhqDawGudkaehpOfvdkuf7Smaz Gaewm&Sdygw,f/
olwdkhjunf&wm 'DtvkyfuaehpOf0ifaiG&SmwJhenf;wpfckjzpf[efwlygw,f//ajrmif;xJu qDa0haewJhae&mav;udk ydwfpdrf;yg;vdkydwfpav;eJhJhESpfjyD;uyfygvmwJhqDaw G GudkyHk;xJxnfh,loGm;avh&Sdygw,f....pyfpkjunfawmh wpfcgwpfavrsm;...qDuefvSnfwm...vJwmESifhawG&ifajrm if;xJuqDysufuaomif;csDjyD;awmif 0ifaiG&ygowJh......'DZ,fqDysuf?t*sFif0dkifysufawGudkawmh qDjyefcsufwJhae&ma&mif;jyD;...pm;qDysufawGudkawmhj yefcsufjyD; i&kwfoD;tavSmfawmifha&mif;aomvkyfief;rsm;rSjyef0,f juygowJhcifAsm...uJ...aumif;a&m..
သုံးပြီးသား အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ပြန်ချက်ထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကုို recycle အနေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတာမျိူး ရှိပါတယ် ... အနဲဆုံး မလေးရှားနဲ့ အဘူဒါဘီမှာ ရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီတချိူ့က ရောင်းနေပါတယ် ... (ကုိုယ့်ဆီက ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဘဲ လုပ်စားနေတယ် ထင်မစုိုးလို့)
Bae Lu Wa, chitpa, fergusan, GuruAM, Hollinaz, honelay86, Jin_kaleat, k-pooh, ko too, ktg, LU SHAY, mahawgani, mdychat, MNO.BN, shadow69, springnet1997, stroms, theinhtike84, yankanar
07-08-2012 02:14 PM #1000
Thanked 8,767 Times in 317 Posts
နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းခိုးတာရော လာဘ်ပေး လာဘ်ယူလုပ်တာရော အရေးယူရင် ထောင်မချခြင်ရင်နေ၊ သူ့ဟာနဲ့သူ ဆိုက်ကားနင်းစားစား၊ ကူလီထမ်းစားစား၊ ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းစေခြင်တယ်။ တိုင်တဲ့သူကို သင့်တော်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခုဆုကြေးခွဲပေးပြီး စီးပွားရေးဈေးကွက်တခု ဖြစ်လာအောင် လုပ်စေခြင်တယ်။ ခိုးစား၊ လုစား၊ လိမ်စား၊ လဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်စားလို့ ရတာထက် ဆုံးရှုံးမှုကများလာရင် လုပ်စားအာဏာရှင်တွေ အာဏာရှင်လုပ်စားတာတွေပါရပ်သွားမှာပဲ။
bluekite, Dreamy, fergusan, honelay86, ko too, ktg, mahawgani, MNO.BN, painpainlay, shadow69, sumoenaing19, theinhtike84, yankanar, zani